Ny kinova vaovao an'ny KDE Applications 20.12.2 dia misy | Avy amin'ny Linux
Fampiharana KDE 20.12.2 Fanavaozana ny fitambarana vao navotsotra Febroary novolavolan'ny tetikasa KDE. Raha fintinina, ao anatin'ny fanavaozana ny volana febrily dia navotsotra ny kinova misy programa 225, tranomboky ary plugins.
Ho an'ireo izay mbola tsy zatra ny Applications KDE, azonay lazaina aminao izany ireto dia andiana fampiharana sy tranomboky mifanentana noforonin'ny vondrom-piarahamonina KDE, izay ampiasaina amin'ny rafitra fiasa mifototra amin'ny Linux, fa ny ankamaroan'ireo rindranasa ireo dia cross-platform ary mivoaka amin'ny mpandefa mahazatra.
Ny fonosana fangatahana KDE taloha izy dia ampahany tamin'ny fananganana rindrambaiko KDE.
Ny ohatra misy amin'ireo fampiharana misongadina ao anaty fonosana dia misy ny manager file Dolphin, mpijery rakitra Okular, tonian-dahatsoratr'i Kate, fitaovana rakitra emulator terminal Arky Konsole ankoatry ny hafa.
1 Fampiharana KDE 20.12.2 Fampisehoana vaovao lehibe
1.1 Raiso ny Applications KDE 20.12.2
Fampiharana KDE 20.12.2 Fampisehoana vaovao lehibe
Amin'ity fanavaozana vaovao an'ny KDE Applications 20.12.2 ity fangatahana vaovao antsoina hoe «Kongress» no naroso ary izay tafiditra ao amin'ny kinova 1.0. Kongress dia natao hiaraka amin'ireo mpanatrika ny fihaonambeEny, ny fandaharana mamela anao hijery ny kalandrie fihaonambe sy ny fandaharam-potoana fitsidihana amin'ny tatitra mahaliana, ho fanampin'izay ho an'ireo mpampiasa Android dia azon'izy ireo atao koa ny manandrana ny fanangonana isan-kariva avy amin'ny trano fisakafoanana KDE F-Droid.
Ny zava-baovao iray aseho dia ny a fanombohana ny rafitra fitantanana ny tetikasa "Calligra Plan 3.3", izay mamela handrindra ny fanatanterahana asa, mamaritra ny fiankinan-doha eo amin'ny asa tanterahina, ny drafitra ny fotoana famonoana, manara-maso ny toetoetran'ny dingana isan-karazany amin'ny fampandrosoana ary mitantana ny fizarana loharano rehefa manangana tetikasa lehibe.
Ny fiovana lehibe indrindra amin'ny kinova vaovao dia mifandraika amin'ny fanatsarana ny fitaovana fanaovana pirinty, ohatra, izao dia afaka manonta angon-drakitra mifanaraka amin'ny elanelam-potoana iray ianao, ary koa mandrefy ny vokatra amin'ny pejy iray na maromaro.
Etsy ankilany, asongadino fa ny mpanjifa XMPP Kaidan 0.7 nanampy ny fahaizana mandefa rakitra amin'ny maody Drag & DropHo fanampin'izay ora misy fanohanana hahazoana vaovao momba ny fampiharana sy ny rafitra fiasan'ireo mpampiasa ao amin'ny lisitry ny fifandraisana.
Nampidirina Shift + Ampidiro ny fampidirana mba hampidirana fiatoana tsipika rehefa manoratra hafatra. Amin'ny famoahana manaraka, antenaina ny fanohanana ny fampandrenesana fampidirana lahatsoratra sy ny fampifanarahana ny tantaran'ny hafatra.
Ho fanampin'izay, ny mpanjifa Matrix Neochat dia nohavaozina amin'ny kinova 1.0.1 ary io dia mamaha ny olana amin'ny fanontana fanontana, mampiseho avatar sy sary mitsitsy.
Eo amin'ny lafiny fanitsiana ihany koa, amin'ny fanambaràna an'ity kinova vaovao an'ny KDE Applications 20.12.2 ity dia voalaza fanametraka bug ao amin'ny mpitantana ny rakitra Ark izay niteraka fianjerana rehefa nikatona ny varavarankely rehefa nametraka ny fisie TAR.
Ary raikitra ihany koa ny fianjerana rehefa mivoaka ny kiheba rehetra ao amin'ny emole terminal Konsole.
Amin'ireo fanovana hafa izay miavaka amin'ny kinova vaovao an'ny KDE Applications 20.12.2:
Ny mpitantana ny rakitra Dolphin dia manome ny kajy haben'ny lahatahiry mety ho an'ny fizarazaran'ny FUSE sy ny rafi-drakitra tambajotra.
Ao amin'ny tonian-dahatsoratra hex dump, Okteta 0.26.5 nanatsotra ny fisafidianana teti-doko ary nanampy safidy iray mba tsy hampandehanana ny blaogy.
Safidy diksionera iray no nampiana ao amin'ny sehatry ny fampiharana ny fianarana Japoney Kiten.
Ao amin'ny rafitry ny maodely Umbrello UML, nisy ny lozam-pifamoivoizana namboarina rehefa nitady widget iray tamin'ny kisary iray.
Raiso ny Applications KDE 20.12.2
Ho an'ireo izay liana amin'ny fahazoana ity kinova KDE Applications 20.12.2 vaovao ity dia tokony ho fantatr'izy ireo fa ho tonga izy io amin'ireto fizarana Linux manaraka ireto izay mampiasa ny KDE.
Raha tsy misy firesahana bebe kokoa dia azoko ampiana fotsiny fa raha te hahalala bebe kokoa momba azy ianao na te hahafantatra ny fomba hitsapana an'ity kinova beta ity dia azonao atao tsidiho ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ny kinova vaovao an'ny KDE Applications 20.12.2 dia efa misy izao
Fijirihana etika: Fampiharana malalaka sy misokatra ho an'ny GNU / Linux Distro anao